आज दिनभर काठमाडौं– ललितपुरको कहाँ–कहाँ जाँदैछ त बत्ती ? हेर्नुहोस् ! | suryakhabar.com
Home उर्जा आज दिनभर काठमाडौं– ललितपुरको कहाँ–कहाँ जाँदैछ त बत्ती ? हेर्नुहोस् !
on: १८ माघ २०७६, शनिबार ०७:५१ In: उर्जाTags: No Comments
काठमाडौं । आज शनिबार काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न स्थानको बत्ती दिनभरी नै जाने भएको छ । महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रको धापासी फिडरबाट वितरित लाइन जोडिएका ठाउँमा ९ घण्टा बत्ती जाने भएको हो । चक्रपथ विस्तार कार्यका लागि नेपाल वन निगम लिमिटेडले रुख कटान गर्ने भएकोले बत्ती जाने भएको हो ।
बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म बत्ती नआउने लिमिटेडले जनाएको हो । यस फिडर अन्तर्गत बसुन्धारा, सामाखुशी चोक, रानीबारी, गोंँगबु चोक, टोखा रोड हुँदै ग्राण्डी अस्पताल लगायतका क्षेत्रहरुमा बत्ती जाने भएको छ ।
यस्तै, ललितपुरका केही ठाउँमा शनिबार बिहानदेखि नै लोडसेडिङ हुने भएको छ । पुल्चोक वितरण केन्द्रको टेकु पुल्चोक फिडरबाट वितरण गरिएको ११ केभी लाइनमा सेक्सनलाइजर राख्ने तथा जम्परहरु मर्मत गरेर फिडर सुधार गर्नुपर्ने भएकोले ६ घण्टा लोडसेडिङ हुने भएको हो ।
शनिबार बिहान ११ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म जम्मा ६ घण्टा बत्ती निभाइने पुल्चोक वितरण केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रकाअनुसार पुल्चोक फिडर अन्तर्गत बल्खु, सानेपा साँचल, सानेपा चोक, प्रधानसेनापति निवास, झम्सीखेल चोक, सीजी कार्यालय क्षेत्रलगायतका ठाउँमा बत्ती काटिनेछ ।